Malunga nathi -Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Joint Technology Co, Ltd.
Igxininisa R & D kunye nokuvelisa ulwenziwo ngumngundo kunye noomatshini izixhobo iindawo processing, thina liphuhlise kwizinga eliphezulu kunye nophando-zobugcisa uphando, uphuhliso, imveliso, iqela lenkonzo kunye nenkqubo yolawulo, kunye neemveliso zandiswa ukuya ngaphezulu kwe-11 uthotho koomatshini wokugaya, kwiziko umatshini, ngoomatshini ingalo, esizisebenzelayo. Iimveliso ezikhethekileyo ezisemgangathweni kunye nodumo olwahlukileyo lophawu, iimveliso zethu zithengiswa kwizixeko ezingaphezu kwe-40 eziphuhlisiweyo kulo lonke elase-China, nakwamanye amazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela e-Asia, eYurophu naseMelika.
Inkampani yethu ithatha imveliso ekumgangatho ophezulu njengokuqhelaniswa, uluvo lwe-R & D kukubonelela abathengi ngeemveliso ezifanelekileyo kakhulu, yaba ngumenzi wesixhobo sobuchwephesha esinemveliso epheleleyo yomngundo kunye nezixhobo zomatshini wokulungisa kunye nokuyila okumandla okwenziwe eTshayina .
● Uncedo lomgangatho: inkqubo esemgangathweni kunye neenkcukacha zolawulo lomgangatho kunye nendlela yokusebenza yokuhlola, itekhnoloji ephezulu yokuvelisa, isoftware ekufumaneni inqanaba eliphezulu kunye nezixhobo zekhompyuter- ukuqinisekisa unikezelo oluzinzileyo lweemveliso ezigqwesileyo.
● Iziphumo zophando kunye nophuhliso: ngaphezulu kweminyaka engama-20 yokubambelela kuphando olunzulu kunye nemvula yetekhnoloji- yenze uphawu olwenza ukusebenza kwezixhobo ngokubanzi kube ngcono, zilungiselele izixhobo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, kwaye zibonelele ngezixhobo kunye nokusetyenziswa kwezisombululo ezibanzi.
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, imodeli yokusetyenziswa yelungelo elilodwa lokushicilela
● I-ERP, i-CRM kunye nezinye iinkqubo zolawulo lolwazi olubanzi -ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kweshishini kunye nokuphuculwa okuqhubekayo.
Nika abathengi ngeemveliso ezenziwayo ezizenzekelayo
Nika abathengi ngenkxaso yezobuchwephesha kwiimveliso zeCCC, kubandakanya ukuvavanywa kwemveliso, inkqubo yokwenza inkqubo, uyilo lwemidlalo kunye nemveliso.
ukunika abathengi ukungunda okanye izahlulo processing izixhobo izityalo lonke isicwangciso ehambelanayo, kubandakanywa izahlulo processing isicwangciso beat, izixhobo ezifanayo.
Nika abathengi ngezisombululo ezihlanganisiweyo zemigca yemveliso ezenzekelayo, kubandakanya izixhobo ezizisebenzelayo, ukulayisha kunye nokothula izinto ezizenzekelayo, kunye nezinto zokuhambisa ezenzekelayo.